Edere site Tranquillus | Jan 2, 2021 | Na weebụ
Nabata na usoro a, "Otu esi eme ka ị nweta uche".
Aha m bụ Jacky Buensoz na abụ m onye guzobere ụlọ ọrụ Genius Training Academy Sàrl. Abụ m onye na-azụ ọzụzụ na Udemy ma nwee ahụmịhe siri ike na ụwa ọzụzụ. Ejila m map uche m wee zụlite ọzụzụ m ọtụtụ afọ.
N'ime usoro a ị ga-amụta otu ị ga-esi bulie gị ike echiche, gị mémoire na nke gị creativity iji otu usoro echiche echiche kachasị dị irè dị taa.
E kewara usoro a na ngalaba dị iche iche nwere ọdịnaya mmekọrịta na ihe omume iji jiri nke nta nke nta kpọbata gị pụta chọrọ. Anyị ga-aga nzọụkwụ site na nzọụkwụ ka i wee nwee ike iji na ndụ gị ihe ị ga-amụta na nke a.
A mere usoro a maka mmadụ niile chọsie ike ịmụta ntọala nke otú chere, ndị chọrọ ime ka ncheta ha ka mma, ihe okike ha chọrọ, ọ chọkwara imekwu nke ọma n'ihe ndị ha rụzuru ...
-Esi mee ka echiche mmadu. January 10th, 2021Tranquillus
GỤỌ Bipute Na Nchoputa: Ajuju 10 juo onwe gi na mbu!
gara agaMeewanye arụmọrụ na 5S
-esonụParallax mmetụta na PowerPoint 2019